Obama iyo McCain: Lacag bixin iyo raadin dabiici ah » Martech Zone
Obama iyo McCain: Lacag bixin iyo raadin dabiici ah
Jimco, Oktoobar 31, 2008 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Haddii ay jirto hal shay oo beddelay muuqaalkii doorashadii 2008, waa adeegsiga internetka. Waxaan lahadlayay hogaamiye ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee ka jira halkan Indiana isbuucyo ka hor wuxuuna si buuxda u qirtay in xisbigu u baahan yahay inuu xoogaa wax qabsado.
Keyword SpyFu SmartSearch waa adeeg cajiib ah oo loogu talagalay baaritaanka tirakoobka mashiinka raadinta, labadaba mushahar iyo dabiici ahaan. Toddobaadkan ayay bilaabeen SpyFu Kombat. Iskuxirku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isbarbar dhigto laba goobood oo tartamaya oo aad dib u eegis ku sameyso halka eraygooda isweydaarsanaya ay yihiin iyo waliba kuwa ay ku kala duwan yihiin.
Laga soo bilaabo kooxda SpyFu:
Haddii SpyFu muujiso sida ereyada muhiimka ahi u ciyaaraan ololaha tartame, markaa SpyFu Kombat waxay muujineysaa sida tartamayaashani u go'aaminayaan tallaabadaada istiraatiijiyadeed ee soo socota. Markaad gasho boggaga internetka ee 'SpyFu Kombat', natiijooyinka waxay muujinayaan liistada keyword kasta oo loo kala jabiyay ereyo gaar ah iyo ereyo caan ku ah tartamayaasha. Kuwa kula tartamaya? liiska guud wuxuu isu beddelaa miro hoose oo laalaada si loo dhiso istiraatiijiyad kuu gaar ah.
Waxaan ogaanay in xirfadleyda SEM / SEO ay lajireen tartamayaasha culeyska? liisaska muhiimka ah, ama waxay uun doonayeen wax si loo baabi'iyo barohooda daciifka ah. SpyFu Kombat wuxuu isku daraa falalkaas mid. Maxaad heli doontaa waa sawir is-dhexgal ah, oo lagu go'aaminayo sida ay meelihii aad dooratay midba midka kale uu isugu dhafan yahay.
Waa tiknoolajiyad la yaab leh oo aan u sheego sheekada Barack Obama Internetkiisa cajiibka ah ee soo socda - iyo sidoo kale sida John McCain uu ula dagaallamayo.
Volume Raadinta Noolaha: Obama oo garaacaya McCain:
Volume Raadin Lacag Leh: McCain Oo La Dagaalamaya:
Waxaa jira sheeko aad u badan halkan oo aan warbaahinta guud u sheegin, runti waxay ubaahantahay inay ahaato! Taasi farsamada ayaa saameyn ku yeelan karta doorashada waa wax qurux badan!
Tags: barack obamajohn mccainobamaobama iyo mccainbixisay iyo dabiici ahaanololayaal siyaasadeedraadinta dabiiciga ah ee siyaasadeedraadinta lacag bixinta ee siyaasadeed
Oktoobar 31, 2008 at 9:35 PM
Waxaan maanta u sheegayey qaar ka mid ah asxaabta in aan u maleynayey in isticmaalka Obamas ee Internet-ka ay qeyb weyn ka tahay guushiisa, isaga oo dhigaya bogag wargelin ah (voteforchange dot com iyo taxcutfacts dot org) twitterka iyo warbaahinta kale ee bulshada, wuxuu heley hab uu isku duubto jiil dhan oo kula xiriir iyaga habka ay doorbidaan.
Mustaqbalka ololaha waxaa dejinaya xerada Obama-Biden, waxaan arki doonaa inbadan oo tan sanadaha soo socda.
Ka gudub kireysiga UK
Nov 3, 2008 at 7: 12 AM
Si cadaalad ah waan kugu raacsanahay halkaas adam, waxay leedahay saameyn weyn hubaal inuu hubo inuu ogyahay waxa uu sameynayo!
Nov 3, 2008 saacadu markay tahay 1:48 PM
Waxa runtii maskaxdayda ku garaacaya spyfu waa mugga macluumaadka ay bixiyaan. Xagee bay ka helayaan tiradooda?! Uma maleynayo in warbixinnada noocan oo kale ah la heli karo sababo la xiriira xeerarka sirta.
Nov 5, 2008 at 11: 58 AM
hada oo Obama guuleystey kee ayaad u maleyneysaa inuu mushahar fiican ama dabiici yahay 😉
Nov 5, 2008 saacadu markay tahay 12:29 PM
Waxaa jira faa iidooyin iyo faa'iido daro PPC iyo istiraatiijiyado raadin dabiici ah, laakiin marwalba waxaan u maleynayay in dhisida aasaaska kalsoonida iyo raacitaanka weyn ay tahay shaqada baloog iyo raadinta dabiiciga ah.
Waxaan leeyahay hala dilo dhammaan doorashooyinka nacasnimada ah, tani waxay noqon kartaa hab weyn oo lagu saadaaliyo siyaasiyiinteenna mustaqbalka!
Mar 16, 2010 at 6: 14 AM
iyo sidee ku saabsan semrush? Weligaa ma isku dayday adeeggaas?